Sida sawirada tooska ah loogu daro muuqaal la wadaagi karo | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida sawirada tooska ah loogu daro muuqaal la wadaagi karo
Sida sawirada tooska ah loogu daro muuqaal la wadaagi karo
IOS 13 iyo iPadOS, waxaad si fudud u ururin kartaa farabadan Sawirro Toos ah, oo waxaad ku dari kartaa hal muuqaal. Way ku fiican tahay wadaagga, ama samaynta remix qabow ee cajaladahaaga. Tanina maaha mid kale oo ka mid ah qoraallada (cajiibka ah) ee aan isticmaalno Shortcuts si aan u qabanno shaqada wasakhda ah. Samaynta sawirada tooska ah waa muuqaal cusub oo lagu dhex dhisay abka Sawirada.
Waa tan sida loo isticmaalo.
Waan jeclahay muuqaalkan cusub. Sawirada tooska ah ayaa durba ah kuwo aad u fiican, oo wata codsiyo badan oo xiiso leh. Waad duubi kartaa iyaga. Ma doonaysaa inaad beddesho muuqaalka iPhone-kaaga? Waxaad u isticmaali kartaa Sawirada Tooska ah sidii gidaar quful firfircoon oo firfircoon markaad riixdo. Ama waxaad beenin kartaa nalka iftiimaya ee mudada dheer ama waxaad u rogi kartaa sawirada tooska ah GIFs.
Hadda, waxaad dooran kartaa sawiro toos ah oo dhan, oo isla markaaba waxaad ka rogi kartaa muuqaallo gaagaaban oo aad u rogi kartaa hal muuqaal. Waxaa dheer, runtii way fududahay in la sameeyo.
Sida sawirada tooska ah loogu daro muuqaal
Si aad u samayso muuqaal sawiro toos ah, kaliya fur abka Sawirada oo hel sawirro toos ah. Si aad u aragto dhammaan sawiradaada tooska ah hal shaashad, aad Muuqaalada albamada, oo hoos ugu dhaadhac Noocyada Warbaahinta liiska. Taabo Sawirada Live, oo waxaad arki doontaa ururintaada.
Taabo Sawirada Tooska ah si aad u aragto… waad qiyaastay.
Sawirka: Cult of Mac
Kadib, kaliya ku dhufo Dooro, oo taabo dhammaan sawirada tooska ah ee aad rabto inaad ku darto fiidyahaaga. Kadib, taabo La wadaag falaarta, oo dooro Kaydi sidii Video liiska.
Taabo badhanka cusub ee Keydi sida Fiidiyowga.
Waa kaas. Fiidiyowga si toos ah ayaa laguugu kaydiyaa duubka kamarada, diyaarna u ah daawashada iyo wadaagista
Maxaa dhacaya haddii aad doorato sawir toos ah, oo aan lagu darin? Tijaabadayda, waxay u muuqataa in kaliya Sawirada Tooska ah ay u qalmaan ka mid noqoshada fiidiyowyada. Sawir kasta oo toos ah oo aad u bedeshay qaab kale - Loop, Bounce ama Exposure Long - waa la iska indhatiraa. Ma jirto si loo ogaado haddii aad isticmaashay mid ka mid ah saamayntan adigoon furin sawirka tooska ah si aad u hubiso, markaa tani waxay yeelan kartaa xoogaa niyad jab ah.
Sidoo kale, Sawirada Tooska ah waxaa lagu daraa hab taariikhi ah, oo ugu horeeyo. Ma jirto si aan u arko si aan u beddelo amarkan. Weli, waa khiyaamo aad u hagaagsan, gaar ahaan si degdeg ah - oo aan xanuun lahayn - u beddelashada farabadan Sawirro Toos ah muuqaal gaaban oo dhacdo qoys ah, dheh.
Runtii aad ayaan ugu riyaaqay isticmaalka sifadan cusub. Laakiin hadda, waxaan rabaa xakameyn dheeraad ah. Waxaan qiyaasayaa inay taasi tahay waxa Apple's Clips app loogu talagalay.
Sida loogu dhoco emailkaaga Fastmail
Anshaxa LinkedIn wuu Fashilan yahay: 7 khalad oo kaa dhigi doona mid aan xirfad lahayn
saac ka hor 18
saac ka hor 19
saac ka hor 22
Talooyin SEO ah oo loogu Balaadhinayo Suuqyada Jarmalka ku hadla
Dib u eegista TasteWP: Bogga Martigelinta WordPress ee bilaashka ah si loo tijaabiyo Plugins WP